Global Voices teny Malagasy » Brunei: fampisehoana fahitalavitra mivantana “Passport to Fame” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Janoary 2009 4:35 GMT 1	 · Mpanoratra Senor Pablo Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Media sy Fanoratan-gazety, Mozika, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Manana ny fankafizany manokana ny télé réalité toy ny firenen-kafa i Brunei amin'ny fisafidianany izay mpihira tiany indrindra. Nahatratra ny faratampony ny andiany faharoa tamin’ny fifaninana ny P2F(Passport To Fame) tamin’ny nioahan'i Dayat ho mpandresy tamin’izany. RanoAdidas dia nitatitra ny fizotran’ny lanonana ka nivoahan'i Dayat ho mpandresy ao amin'ity blaogy  ity ary nanao valandresaka tamin’ity mpanakanto ity, eto. 
“Oay izany famaranana e!!! iray tamin’ireo ankafizin'ny besinimaro tafakatra tamin’ny dingana famaranana i Dayat sady nilana fampisehoana fito mihitsy vao fantatra ny mpandresy ary mendrika izany tanteraka i Dayat. Izy aza no nahazo ny tehaka mirefodrefotra indrindra rehefatsy nahay namarana i AJ. Voafehiny tsara ny hira famaranana – This is the moment na izao no fotoana – ka dia nisongadina ny tompondaka rehefa azony ny isa be indrindra tamin’izy telo mpifaninana.”
Tsy vaovao amin’ny tontolon’ny blaogy I Dayat satria mpitoraka blaogy ihany koa izy. Afaka mamaky ny blaoginy eto  ianao. Ny blaoginy nadika tamin’ny teny anglisy sy teny Malay no mitantara ny andavanandrony nandritra ny fifaninanana.
Tsy mora ny mampizotra hy fifaninanana sy misy mampiady hevitra. Misaotra ny blaogy:  My Skeptical Views of Zayn Sabri  izay niara-niasa tamin'ity fifaninana ity. Afaka nizara niaraka tamin’ny mpankafy ny P2F sy ny mpamaky izy momba ny vaovao farany momba ny fifaninana sy ny fifanoheran'ny mpitsara ary ny tsikeran'ny mpijery  eo amin’ny mpifaninana.
“Naheno sy namaky matetika ny hafatra ary ny tsikera aho momba ny fitantanana sy ny mpitsaran’ny fampisehoana p2f . Nilaza ny sasany fa miangatra sady tsy manana traikefa ny mpitsara rehefa manome ireo salan’isa ny mpifaninana. Raha jerena ifotony ny maha izy azy ny mpitsara, dia tsy afaka handa isika fa olona samihafa tanteraka izy tsirairay avy raha oharina amin’ny mponina ao aminay eto Brunei. Manana ny tiany sy ny tsy tiany ny efatra amin’izy ireo, manana traikefa ara’asa, manana ny taikefa itovizana ara-mosika.
Nampidera ny fahaizany hanasongadinana ny mpifaninana  tsirairay i Zayn izay DJ (mpikoso-kapila) ao amin'ny radio. Jereo ny horonan-tsary YouTube eto ambany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/17/1495/
 , eto.: http://www.ranoadidas.com/?p=1724
 vaovao farany momba : http://zaynsabri.blogspot.com/2008/12/p2f-grand-final-concert-27th-december.html
 fifanoheran'ny mpitsara ary ny tsikeran'ny mpijery: http://zaynsabri.blogspot.com/2008/11/biasunbias-experiences-comments.html
 ny mpifaninana: http://zaynsabri.blogspot.com/2008/12/pelangi-entertainment-news-dayat-and.html